musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Akashata kana Akanaka? Nderipi Rondedzero Ichaitwa Nevatengesi Parizvino?
Zvakawanda zvakanyorwa pamusoro pekudiwa kwezororo rekodhi gore rino. Creo Advisors proprietary research inosimbisa akakosha maitiro ayo anozosiyanisa zvakanyanya kufara vatengesi kubva kune vakaodzwa mwoyo mwaka uno wezororo. Nepo sarudzo zhinji dzakavharirwa mukati, kuitwa kwemazuva makumi matatu nemanomwe ekupedzisira zororo risati rasvika kuchaita basa rakakura kupfuura zvakajairika nekuda kwemaitiro ekutenga kwevatengi uye matambudziko ekutengesa.
Zvinonyanya kutora kubva mukutsvaga kwevatengi zvinosanganisira:
• Vatengi havana kuendesa mberi kutenga kwezororo. Muchokwadi, vatengesi vanotaura kuti vangangoita 7% kumashure kwedanho rekushandisa maringe negore rapfuura kubva kutanga kwaMbudzi
• Kushomeka kwezvinogona kuitika kuchakanganisa maitiro anozokonzera shanduko inodarika mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora mukushandisa mari pakati pevatengesi mwaka uno wezororo.
• Nepo vanopfuura 85% yevatengi vachironga kuenda kuchitoro kunotenga, vanofungidzira kuti ruzivo ruchaita 4.5 kubva pagumi
• Kugadzirisa kudiwa kusingaenzaniswi, zvipingamupinyi zvakawanda, uye tarisiro yakaderera zvinoda imwe nhanho inotevera yekugona uye kuuraya. Nekudaro, mibairo yakakosha kune vanobudirira vatengesi
Kudiwa Kwezororo uye Nguva
Anenge ese masaini anodiwa pamusika ari kunongedzera kune 'kamwe muchizvarwa' zororo. Mutsvagiridzo yedu yevaridzi yakaitwa kubva munaNovember 4-12, 2021 (N=2,519), vangangoita 26% yevakabvunzwa havasati vatanga kutenga kwavo kwezororo kubva kutanga kwaMbudzi gore rino zvichienzaniswa ne22% gore rapfuura. Pakazere, vatengi vanotaura kuti vane 7% yakaderera yekutenga kwavo kwezororo kwakapera gore rino zvichienderana nenzvimbo imwechete gore rapfuura. “Iri ranga riri gore rakabatikana, rakaoma kunzwisisa kuvatengi. Kunonoka kutenga, kusanganiswa nemutengi ane hutano mune zvemari, kusimudza chishuwo chekupemberera zororo rakajairwa, uye zvimwe zvinhu zvinotungamira kudiwa kwakanyanya mumavhiki mashanu nehafu anotevera, "akadaro Richard Vitaro, Managing Director, Creo Advisors. Pamusoro pezvo, ongororo yedu inosimbisa yakasarudzika madhijitari uye echinyakare midhiya zvido, izvo zvinogona kukwidziridzwa kusvika kune vatengi panguva ino yemwaka.
Supply Chain Matambudziko uye Inoda Kutora Mikana
Kushushikana kuri kukura kwakatenderedza kwepasirese kwekutengesa kuri kuramba kuchikwira apo isu tinotanga kunzwa mhedzisiro yekunonoka kwezvinhu zvezororo mumaindasitiri. Sekureva kweongororo yedu, kushomeka kwezvivakwa kuchafambisa ingangoita 7% kutenderera mukutengesa zororo rino, iro richawanwa nevaya vatengesi vane nzvimbo dzakasimba mu-stock kana vanogona kutungamira vatengesi kune dzimwe nzira dzinogamuchirwa. Isu tinotarisira kuti kuchave nemari inodarika madhora makumi matanhatu B mumari inobatwa nevaya vane migove yakasimba yekugovera, nevamwe vatengesi vangangotarisana neakavhuvhuta maota mushure mezororo sezvo masheya ari kuramba achiyerera. Steve Vielmetti, Maneja Director kuCreo Advisors, anoti, "Vatengesi nevagadziri vakatora njodzi nekuvaka kwepamberi kana kuve neakawanda macheni ekutungamirira mutengi kune dzimwe nzira dzinogamuchirika kana kuita nekukurumidza kumisikidza maodha kana stock, vachahwina mwaka uno. ” Steve anowedzera, "Kunze kwezororo, makambani anofanirwa kuenda kune 'smart supply chain' inotsanangurwa nevamiriri vakarongeka uye midziyo, pamwe nekutorwa kwemidziyo yekuronga yepamusoro iyo inowedzera data senge kubvunza kwewebhu, kufamba, uye mamwe masaini ekunze kutyaira. chaiyo-nguva kuuraya uye agility. "
Ongororo yedu inoratidza kuti vanopfuura makumi masere neshanu muzana evatengi vanoronga kuenda kuzvitoro kune imwe chikamu cherwendo rwavo rwekutenga zororo rino, asi vari kushushikana nezvechiitiko ichi. Pamusoro pezvo, nharaunda yechitoro yawedzera kuoma nekufamba kwenguva neBOPIS, Curbside, Covid protocol, uye zvimwe zvinhu zvakawanda.
Nepo sarudzo zhinji dzakatoitwa, vatengesi vachiri nemukana wekutyaira mhinduro kune yasara ~ 75% yekutengesa kwezororo. Kugonesa maalgorithms edhijitari, kuisa kushambadza kwechinyakare, kutyaira kubatanidzwa kwevatengi uye kuvimbika, kuve nechokwadi chekushanda kwakakwana kwechitoro, uye kuisa chinzvimbo chiripo chiripo zvine hungwaru zvichabatsira kutyaira yakasimba yepamusoro uye yepasi mutsara mhedzisiro mwaka uno. Zviito zvakadaro zvinogoneswa nehutungamiriri hwakasimba, kurongeka kwesangano, kugona, uye analytics. Tichifunga nezve kusanganiswa kwekuda kwevatengi kwakasimba uye kupararira kwakawanda uye matambudziko evashandi, vatengesi vanoita zvakanaka zororo rino vanowana mibairo yakakosha. Pamusoro pezvo, kugona kunoitwa nevatengesi panguva yezororo rino kuchavaka simba resangano, ravanogona kuwedzera muna 2022 zvichienda mberi.